Published May 1, 2021 at 6:35 AM CDT
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegtay inay diiday $ 95 milyan oo ah lacagta federaalka ee loogu talagalay baaritaanka coronavirus ee iskuulada maxaa yeelay uma maleynaynin baahi loo qabo maalgelinta.
Reynolds, oo reer Jamhuuriya ah, ayaa ku dhawaaqday go’aankeeda habeenimadii Khamiista ee Fox News show waxayna dhaleeceysay maamulka madaxweyne Joe Biden ee ay ku bixiyeen lacagta loogu talagalay in lagu balaariyo tijaabada.
Xisbiga Jamhuuriga ee Iowa ayaa amaanay go’aanka Reynolds, iyagoo sheegay in maamulka Biden uu ku fashilmay dadaalkiisa ku aadan in ardayda lagu celiyo fasallada shaqsi ahaan laakiin Reynolds ay ku guuleysatay.
Auditor-ka gobolka Dimuqraadiga Rob Sand ayaa ku dhaleeceeyay barasaabka "inuu siyaasadda la ciyaarayo Iowans caafimaadkiisa iyo doolarkiisa canshuurta."
Warbixinta toddobaadlaha ah ee COVID-19 ee ay soo saarto Sioux City Community School District ayaa muujineysa laba xubnood oo shaqaale ah oo imtixaan laga qaaday. Waxaa karantiif ah 140 arday. Sidoo kale, fasal fasallo badan ah oo ka tirsan Dugsiga Hoose ee Riverside ayaa lagu meeleeyay Barashada Farsamada ee Jawaabta Degdegga ah.
Xarunta Farshaxanka ee Sioux City waxay bilaabaysaa toddobaad howlo bilaash ah. Subaxnimada Isniinta, munaasabadda qaddarinta qaxwada waxay dhacdaa laga bilaabo 7:30 illaa 9 am Talaadada, waxaa jira "Ubaxyo ku yaal Parade" oo lagu soo bandhigayo ubaxyo udgoon oo ku yaal barxadda Xarunta Farshaxanka.
Habeenkii Khamiista, Warbaahinta Dadweynaha ee Siouxland waxay kafaalo qaadaan fiidkii muusikada muusikada xargaha leh ee Mary Watts min 5 illaa 8.
Toddobaadka ayaa xirmaya Jimcaha 5 illaa 7 fiidnimo. oo leh "Wine iyo Cheese Soiree" (ku dhaartay-a) oo ay ku jiraan waxqabadka bannaanka ee muusikiiste maxalli ah iyo qoraa Mike Langley (Lang-lee).
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mid ka mid ah dhacdooyinka la qorsheeyay ka fiiri bogga Xarunta Farshaxanka, siouxcityartcenter.org.
Waaxda Magaalada Sioux waxay baareysaa dil ka dhacay agagaarka Dugsiga Hoose ee Morningside STEM. Saraakiisha ayaa helay nin iyo haweeney u dhinteen…